पाँचथरलाई नमूना जिल्ला बनाउन लागिरहेको छु – Akhabar Dainik
पाँचथरलाई नमूना जिल्ला बनाउन लागिरहेको छु
कोमलप्रसाद धमला पाँचथर जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी हुन् । पाँचथर आउनुअघि सप्तरी जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरेका धमला पाँचथर जिल्लालाई विकास निर्माण र सुशाषनको नमूना जिल्ला बनाउन लागिपरेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, बितेनि-५, ओखलडुङ्गा स्थायी निवासी धमलासँग जिल्लाको विकास निर्माणसँग केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
जिल्लाको पछिल्लो विकास निर्माणको अवस्था के छ ?
पाँचथर विकास, निर्माण र राम्रो सुशाषन भएको जिल्ला हो । यहाँ जिल्ला विकास समितिबाट समयमै कार्यसम्पादन हुन्छ । पहाडी जिल्ला भए पनि यसको सबै गाविसको सबै वडामा बाटो पुगेको छ ।न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने तेस्रो जिल्ला हो यो । त्यसैले यहाँ सुशाषन छ ।
यो जिल्लामा नेपाल सरकारका ठूला योजना छैनन् । मध्य पहाडी लोकमार्ग बनिरहेको छ । प्राइभेट सेक्टरबाट जलबिद्युत्तका ४ वटा जलविद्युत्त आयोजना बन्ने क्रममा छन् ।
उर्जा र नगदेबालीमा यो जिल्ला अगाडि छ । अर्गानिक चिया, अलैंची, गोलभेँडा अदुवाबाली यहाँबाट राम्रो निकासी हुन्छ । समग्रमा हेर्दा यहाँका ११ प्रतिशत मात्रै जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।
जिल्लाको विकास निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ ?
पुस मसान्तसम्मलाई हामीले सम्झौताको अवधि तोकेका थियौं । सबै योजनाको सम्झौता करिब–करिब भइसकेको अवस्था छ । हामी थप बाटोको ट्याक खोल्ने काममा फोकस गर्दैनौं । बाह्रै महिना चल्ने बाटो विस्तार गर्ने र पिच गर्ने काममा हामी केन्द्रित छौं । गाविस या संघ संस्थाले नयाँ बाटो खोल्ने कुरा ल्याए भने जिविसले अनुमति दिएपछि मात्रै रुट खोल्न पाउने पोलिसी बनाएका छौं । बाटो धेरै भएकाले यस्तो नीति लिएका हौं । वातावरणमा असर पर्ने ठाउँमा बाटो लान रोकेका छौं ।
अहिले आएका योजनाहरु सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् । सयमा सय योजनाको सम्झौता त तोकिएको अवधिमा नसकिएला तर प्रमुख योजनाको सम्झौता सकिनेछ । असार मसान्त भएपछि विकास निर्माणको काम हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामीले अहिले देखि नै अनुगमन गरिरहेका छौं । विकास निर्माण प्रभावकारी नभएमा तत्कालै याक्सन लिएर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि हामीले अँगालेका छौं ।
विकास निर्माणका काम गर्न समस्याहरु चाहिँ के कस्ता आउँदा रहेछन् ?
म सप्तरीबाट यहाँ आएको हुँ । उताको भन्दा यता निकै कम समस्या छ । यहाँ समस्या के छ भने उपभोक्ता सम्झौता गर्न ढिला आइदिन्छन् । सम्र्झौतापछि पनि कार्यान्वनय गर्न ढिलाइ गर्ने पद्दति छ । धेरैजसो योजना अन्तिम चौमासिकमा आएपछि हुने र निरीक्षण गर्न नसकिने समस्या यहाँ रहेछ ।
यसको समाधानको सूत्र पहिल्याउनु भएको छैन त ?
छ । राजनीतिक सहिष्णुता भएको जिल्ला भएकाले उहाँहरुसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं ।
जिल्लामा राजनीतिक दबाब बढी हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ, पाँचथरको अवस्थाचाहिँ के छ नि ?
इमान्दारितापूर्वक भन्नु पर्दा यो गजब जिल्ला छ । यहाँ राजनीतिक दबाब भनेको फिटिक्कै छैन । जनताका अलि अलि माग लिएर आउनु स्वभाविक हो, तर दबाब दिएर यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति यहाँ शून्य छ ।
जिल्लाको विकास निर्माणको लागि कुनै त्यस्तो ठोस योजना पनि बनाउनु भएको छ ?
अधिकांश योजना च्यानलबाट आउँछन् । यसबाहेक मैले नै ्केही योजना बनाएको छु । सुशाषनमा राम्रो जिल्ला भएकाले देखिने गरी सुशाषन कायम गर्न केही काम सुरु गरेका छौं । अनलाइनबाट काम गर्ने कामहरु गर्ने योजना अगाडि बढाइरहेको छु ।d.getElementsByTagName(‘head’).appendChild(s);